China CNC na -arụ obere akụkụ ọla rụpụta na ụlọ ọrụ | ỊZỤLI-Elec
Industrylọ ọrụ igwe na -arụ ọrụ gụnyere: ikuku filament winding, mbepụ laser, nhazi dị arọ, njikọta igwe, ịse igwe, ịcha plasma, ịgbado ọkụ nkenke, mpịakọta akpụ, mpempe akwụkwọ na -ehulata, ịnwụ ibe ya, ọnwụ mmiri jet, ịgbado ọkụ nke ọma, wdg. na -ezo aka na usoro nrụpụta ngwaahịa site na igwe; Ọ na -ezo aka na usoro nrụpụta na nhazi akụkụ ya na lathes, igwe igwe, igwe na -egwu mmiri, igwe igwe nri, mach stamping ...
Gịnị Bụ Ịrụzi?
Industrylọ ọrụ igwe na -arụ ọrụ gụnyere: ikuku filament winding, mbepụ laser, nhazi dị arọ, njikọta igwe, ịse igwe, ịcha plasma, ịgbado ọkụ nkenke, mpịakọta akpụ, mpempe akwụkwọ na -ehulata, ịnwụ ibe ya, ọnwụ mmiri jet, ịgbado ọkụ nke ọma, wdg. na -ezo aka na usoro nrụpụta ngwaahịa site na igwe; Ọ na -arụtụ aka na -arụ ọrụ na -eji lathes, igwe egwe ọka, igwe na -egwu ala, igwe na -egwe ihe, igwe nsị, igwe ihe nkedo na ngwa ọrụ ndị ọzọ.
Igwe achọrọ maka nhazi bụ igwe igwe ihe ngosi dijitalụ, ihe ngosi dijitalụ na -akpụ igwe, ihe ngosi dijitalụ, igwe EDM, igwe nri, ebe nrụpụta, ịgbado ọkụ laser, ịgagharị waya, wdg, nke nwere ike ime ntụgharị, egwe ọka, planing, egweri na Nhazi CNC nke akụkụ nkenke. Igwe dị otú ahụ dị mma n'ịtụgharị, egwe ọka, planing, egweri na nhazi CNC nke akụkụ nkenke, ma nwee ike hazie akụkụ igwe dị iche iche na -adịghị agbanwe agbanwe, yana izizi nke 2 μ m. Ị nwekwara ike ịhọrọ teknụzụ nhazi kwesịrị ekwesị yana imepụta na akụrụngwa nhazi dị ka mkpa dị iche iche si dị nke eserese ahụ.
CNC, makwaara dị ka gong kọmputa ma ọ bụ CNC machining, bụ n'ezie aha na Hong Kong. Mgbe e mesịrị, e webatara ya na China. N'ezie, ọ bụ igwe igwe CNC. Na Guangzhou, Jiangsu, Zhejiang na Shanghai, enwere ụdị igwe akpọrọ "CNC machining center". Ọ bụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Isi ọrụ ya bụ ịkwadebe mmemme igwe, ya bụ, ịgbanwe ọrụ ntuziaka mbụ ka ọ bụrụ mmemme kọmputa. N'ezie, ịchọrọ ahụmịhe na nhazi akwụkwọ ntuziaka
CNC machining nwere uru ndị a:
① Ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọrụ na -ebelata nke ukwuu, a chọghịkwa ngwa ọrụ dị mgbagwoju anya maka akụkụ akụkụ nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanwe ọdịdị na nha akụkụ, naanị ihe ị ga -eme bụ imezi mmemme nhazi akụkụ, nke dabara maka mmepe na mgbanwe ngwaahịa ọhụrụ.
Ọ nwere ogo nhazi siri ike, nkenke nhazi dị elu yana nkenke ikwughachi ugboro ugboro, ma nwee ike izute nhazi ụgbọ elu chọrọ.
③ N'ihe banyere ụdị dịgasị iche iche na obere obere ogbe, arụmọrụ nrụpụta dị elu, nke nwere ike belata oge nkwadebe mmepụta, mmezi ngwa igwe na nyocha usoro, ma belata oge ịbelata n'ihi iji oke ịcha kacha mma.
④ Ọ nwere ike hazie ebe dị mgbagwoju anya nke siri ike ịhazi ya site na usoro ọdịnala, yana ịhazi ụfọdụ akụkụ igwe anaghị ahụ anya.
Machining akporo nke ịzụlite:
1. nkenke machining.
2. nkenke akụrụngwa akụkụ nhazi.
3. Nhazi akụkụ ahụ mapụtara na-abụghị ọkọlọtọ.
4. Ịrụzi akụkụ ndị nwere ọdịdị pụrụ iche.
5. Ngwaike na n'ibu akụkụ nhazi.
6. Ọgwụgwọ elu nke akụkụ igwe dị iche iche.
Nke gara aga: Ọrụ ngwaahịa ngwaahịa stampụ dị elu
Osote: Nhazi Heatsink dabere na arịrịọ ndị ahịa
Aluminium cnc igwe
Ngwongwo Aluminium CNC
Akụkụ ọla kọpa
Aluminium nke CNC
Akụkụ Aluminium nke CNC
Nchara igwe CNC
CNC machining Nkedo
Prototyping CNC Nhazi
Akụkụ obere akụkụ CNC
Akụkụ nkenke cnc nkenke
CNC Steel igwe
Akụkụ igwe eji eme akwa CNC
Akwa nkenke Cnc
Akwa nkenke CNC machining
Nhazi Heatsink dị ka ndị ahịa si kwuo ...
Nrụpụta dị elu CNC machining
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Mmiri Efere, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ihe nkedo, Aluminum CNC Machined Parts, Ngwaahịa niile